Umphakathi udinwe wazisukumela | News24
Umphakathi udinwe wazisukumela
AMPHOYISA axwayise umphakathi ukuba ungazithatheli umthetho ngezandla. Lokhu kushiwo emva kokuba umphakathi waseGamalakhe ubambe watitinya kanzima umlisa osolakala ngokudlwengula noma yini ahlangana nayo, noma kuthiwa umfana, intombazane ngisho nezimbuzi imbala.
Ngesonto eledlule iFever ikhiphe umbiko othi amaphoyisa aye ambamba umsolwa kodwa angaba nabo ubufakazi obugcwele. Ezinsukwini umphakathi uhlanganile walibhekisa esiteshini samaphoyisa uyozikhalela, ubalisa ngokuthi uzizwa ungaphephile njengoba lomlisa esacanasa.
Okhulumela amaphoyisa uKapteni Pandarum uthe amaphoyisa angenelile amthatha lomlisa amyisa emtholampilo njengoba abomphakathi bebesho ukumqeda ngenduku.
“Okuyinkinga enkulu ukuthi lomphakathi ababambe lomlisa abanaso isiqiniseko sokuthi uyena lo ofunwa ngamaphoyisa emacaleni okudlwengula,” kusho uPandarum
Uthe uyanxusa umphakathi uma unezinsolo zokuthi kunesigulamkhuba endaweni ubikele amaphoyisa. “Uma umphakathi uzithathela umthetho ezandleni zawo amaphoyisa azobabopha,” kusho uPandurum.